Mang Thian Khual | Sizangkam
“Mang Thian Khual” ဆိုတာက ကလောင်အမည်ပါ။ သူ့ နာမည်အစစ်ကတော့ Tyler D. Davisဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သွားတုန်းက Tedim အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က သူ့ကို “Mang Sian Khual”ဆိုတဲ့နာမည် မည်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Tedim လူတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ အဲလိုပဲ ခေါ်စေချင်တယ်။ Sizang စကားမှာ Sian ဆိုတာက Thianကိုပြောင်းသွားလို့ ဒီတက်ဆိုင်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို Mang Thian Khual လိုပဲခေါ်ပါတယ်။ သူ့ ဗမာနာမည်ကတော့ ဝင်းဟိန်း (သူက ဗုဒ္ဓဟူးသားမို့လို့)၊ သူ့ စပိန်းနာမည်ကတော့ Davíd (ဒါ/သာ ဗီးသ်)၊ နောက်ပြီးတော့ သူ့ ကရင်နာမည်က နံၤကမှံ (နီးကမွီ)။ ဘာဖြစ်လို့ နာမည်အများကြီးရှိသလဲဆိုတော့ ဘယ်သူမှ သူ့အင်္ဂလိပ်နာမည် မပြောတတ်လို့ပါ။ Tyler (ထိုင်လယ်ရ်)လိုသံထွက်အစား Taylor (ထဲလာ)လို သံထွက်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် သူများတွေက သူ့ကို “Davis” သို့ “David”လိုပဲခေါ်ကြတယ်။ အခက်အခဲတွေ သိပ်မရှိစေချင်လို့ ဗမာတွေကို ဝင်းဟိန်းလို ခေါ်ခိုင်းပြီး Zoတွေကို Mang Thian/Sian Khualလို ခေါ်ခိုင်းတယ်။
အသက် ၁၆နှစ်ရှိကတည်းက Mang Thian Khual ဗမာစကားကို လေ့လာနေခဲ့ပြီ။ သူရဲ့ မြို့ထဲမှာ ဗမာပြည်ကလူတွေအများကြီးနေပေမယ့် များသောအားဖြင့် တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပဲ အဆက်အသွယ်ထားတယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ ချင်း (Zo နဲ့ Lai) အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ပိုပြီးနီးနေပြီး သူတို့ရဲ့ ဘာသာစကားတွေကို စိတ်ဝင်းစားလာတယ်။ တက္ကသိုလ်မှာ ဂျာမန်နဲ့ စပိန်စကားတို့ကို လေ့လာပေမယ့် သူ့အားလပ်အချိန်မှာ ဘာသာဗေဒနဲ့ ဗမာစကားကိုလေ့လာတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း စီးယင်းစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဘာသာဗေဒသုတေသန သိပ်မများဘူးဆိုတာကို မှတ်မိတဲ့အခါ၊ Sizangအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ အတူ ကိုယ်ပိုင် ဘာသာဗေဒ ထုပ်ဖို့ ဆန္ဒရခဲ့ပါပြီ။ အဲဒါကြောင့် ဒီ ဝက်ဆိုက်ကို ဖန်တီးပါတယ်။
၂၀၁၄ နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ တကည်းက Sizangkamကို စသင်ပြီး တက္ကသိုလ်နဲ့ အလုပ်များလို့ တဖြည်ဖြည်နဲ့ပဲ တိုးတက်လာတယ်။ အခုတော့ တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ယူရပြီး Sizang မိတ်ဆွေပိုပြီးရလို့ တိုးတက်မှု ပိုမိုပြီးတော့ မြန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ အမြဲတမ်းမှန်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
Mang Thian Khual က America နိုင်ငံ၊ အင်ဒီယားနားပြည်နယ်မှာမွေးပြီးနေထိုင်ပါတယ်။ Indiana University ကနေ ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာလ B.A. (ဂျာမန်ဘာသာ)နဲ့ ဘွဲ့ယူရခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ခုနှစ် ဧပြီလကျရင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ Chiang Maiမြို့မှာ၊ Payap (ဖာယားဖ်) တက္ကသိုလ်မှာ M.A. (ဘာသာဗေဒ)တက်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ သူ့ thesisအတွက် Sizang သဒ္ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေးချင်ပါတယ်။